Sheekh Shariif “ Waxaa faraha baxay Amnigii dalka, Kamana aamusi karno arrimaha qaar” – Soomaali 24 Media Network
Sheekh Shariif “ Waxaa faraha baxay Amnigii dalka, Kamana aamusi karno arrimaha qaar”
Shiikh shariif shiikh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee soomaaliya oo munaasabadda daahfurka xisbiga uu hoggaamiyo ee Himilo qaran oo maanta ka dhacday muqdisho ka hadlay ayaa sheegay inay maalinba maalinta ka danbayso Amni darrada magaalada muqdisho.
shiikh shariif ayaa yiri lagama aamusi karo mararka ay xaaladdu heerkaanoo kale soo gaarto, Amniga muqdisho hoos buu usii dhacayaa jidadka iyo meel kasta dhagxaan ayey dowladdu dhigatay magaaladiina waa kala xirxiran tahay haddana amnigu ma sugna, saxna maaha ee dowladdu qorshe amni iyo istaraatiijiyad hala timaado.
Shiikh shariif ayaa yiri dowladdu waxay shaqaynaysaa in ka badan labo sano ilaa haddana luguma qanacsana, dalkani wuxuu soo maray heerar kala duwan dowladdii millateriga, dagaalla sokeeye, dowlado KMG, ilaa 2012 oo aan dowlad rasmiya dhisannay.
Maanta waxaa noo dhisan dowladdii labaad oo rasmiya ka dib 21 sano oo xukun millateriya, labaatan iyo dhowr sano oo dagaal sokeeyaa, iyo 10 sano ku meel gaara sidaa darteen waa inaanan dib unoqon ee aan horay usoconnaa, Waxaan u baahannahay axsaab siyaasadeed, afkaar siyaasadeed oo cusub, iyo mabaa,dii looga gudbi karo 4.5.
madaxweyne shariif ayaa yiri doorashadii la soo dhaafay waxaan ballan qaaday inaanan dowladda waxba ka sheegin lkn hadda xisbi ayaan hoggaaminayaa fikirkiisa inaan idiin soo gudbiyaana waa muhiim .
wuxuuna hadalkiisa kusoo gaban gabeeyay inuu dowladda inuu dowladda wax kasta oo uu la qaban karo la garab taagan yahay loona baahan yahay in laga gaa,iidaysto shacabka soomaaliyeed oo u bisil dowladnimada.
Previous Muuse suudi oo muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore shiikh shariik shiikh axmed
Next Xasan shiikh” Dalkaan 21 sano ayuu kaligi talis haystay dhibkiisiina wali lagama soo kabsan haddana xoog iyo gacan bira kuwa ku goodinaya ayaa raba inay nugu celshaan.